Koobab waraaqo ah, Kufiican qaxwada, shukulaatada kulul ama cabitaan kasta oo kulul ama qabow, Kufiican isticmaalka guriga ama ganacsiga. Ku habboon dukaanka shaaha ee Caanaha, dukaan caano digir soya, dukaanno qabow, makhaayado cunto-dhakhso leh, dukaan kafeega Dessert House Hotel, makhaayad, guri iyo madadaalo kala duwan, Heerkulka Sare ...
Koobab waraaqo ah, Kufiican qaxwada, shukulaatada kulul ama cabitaan kasta oo kulul ama qabow, Kufiican isticmaalka guriga ama ganacsiga. Waxay ku habboon tahay dukaanka shaaha ee Caanaha, dukaan caano soya bean, dukaanno qabow, makhaayado cuntooyin dhakhso leh leh, makhaayad kafeega Dessert House Hotel, makhaayad, guri iyo madadaalo kala duwan,
Heerkulka sare ee 100 DEG C, ma daadanayo, ur ma leh, cillad fudud ma laha.
Koobabka waraaqaha & daboolida faahfaahinta
Koobabka waraaqaha ah
8oz koob kulul
10oz koob kulul
12oz koob kulul
16oz koob kulul
20oz koob kulul
22oz koob kulul
Daboolida koobabka xaashida ah
ku habboon daboolka qubbada 8oz
ku habboon daboolka fidsan 12 ~ 22oz
ku habboon 12 ~ 22oz daboolka qubbada
Gidaar keli ah / Gidaar laba jibbaaran / gidaar jilicsan
Fasalka cuntada 100% warqad bikrad ah
Flexo daabac / daabicid daabac leh khad darajo cunto ah
Logo iyo design ayaa si diirran loo soo dhaweeyay
Tijaabooyin bilaash ah ayaa la heli karaa
1.Virgln warqad leh shahaado FSC & PEFC. Waxsoosaar leh FDA, LFGB, shahaadada COC.
2.Flexo Priting oo leh khad heer-cunto ah.Qeex naqshad habboon iyo xirxirasho.
Warshadeena waxay ku siin kartaa dhamaan noocyada wax soo saarka ee aad u baahan tahay.
Warshaddeena waxay haysaa seddex dhisme oo cusub, oo ah shirkada ugu weyn ee soo saarta koobabka bartamaha Shiinaha, oo baaxaddiisu dhan tahay 46 hektar.
5.Wershedeena waxay haysaa laba mashiin oo daahan PE ah, afar mishiin daabacaad, 80 mashiinada dhexe, 40 mashiinada xawaaraha sare leh iyo in kabadan 400 oo shaqaale ah, oo leh warshad aan boorka ka jabin.
6.Three waa xakamaynta tayada adag iyo tayada tayada wax soo saarka.
7.Waan ka dhigi karnaa qaabka cabbir kasta oo shey ah.
Hore: baaldi warqad
Xiga: Warqad Straw
Koobka warqadda Universal